Kugara Kamuri mazano - Anobatsira uye zvinokuvadza Art sens - mazano eimba nebindu
05.01.2019 Yakatumirwa na: Art Sense
Imba yekugara, Pfungwa Pamba, Zvemukati, Cikoni, Imba yekudyira
Nekuburitsa aya mazano eimba yekutandarira, tichaedza kuratidza zvimwe zvakanakira uye zvisina kunaka mukamuri ino. Kubatanidza mune yakajairika nzvimbo kicheni, imba yekudyira uye yekugara chisarudzo chiri kuwedzera chakajairika, kunyangwe mudzimba dzisina kukura sehuwandu. Iyi yekuvaka yekugadzirisa iri nyore kwazvo nekuti inovhura nzvimbo uye inopa rusununguko rwakawanda kurongedza ivo. Uye kana mune itsva yekuvaka imba yekutandarira yakagadzirwa kubva kune iyo pfungwa, kuburikidza nekugadzira, kune iyo yekuvaka, kana iri sarudzo mukuvakazve kwechivakwa chekare, inowanzobatanidzwa nezvakawanda zvehunyanzvi, hwesimba uye hwekunyora zvinetso nematambudziko. Iko kushanda hakugadzirike, asi inofanira kuyeukwa kuti kicheni nzvimbo inoshanda. Kushaikwa kweishuviro yakanaka uye kuvapo kwema svutugadzike ekicheni kubva pamisoro kubva kumidziyo, zvishandiso, zvigadzirwa nemidziyo ndechimwe chinhu chakadzika pasi, asi chinogadziriswa nekugona kuve nekugara uchisangana nevamwe mumba. Iyo yekupedzisira inogona zvakare kuve isina kunaka kana isina kukwana imwe nzvimbo yekuvanzika, nekuti kunyangwe kuda kunakidzwa nerunyararo hakugone. Nzvimbo dzakakura dzakavezwa nekamuri yekutandarira dzinofanirwa kuve dzakarongedzerwa. Izvi zvinowanzove dambudziko apo vanhu vanoda masitayera akasiyana mukati mekicheni uye nenzvimbo yekuzorora. Nekudaro, dambudziko iri rinogona kuve dambudziko rekugadzira nekurudziro yekuparadzanisa matunhu emunhu munzvimbo imwechete. Pasinei nezvakataurwa pano, kusarudza kugovera imba inyaya yemunhu oga yekubatana, uye chii chinotadzisa mumwe zvinogona kuratidza kuve mukana wakanyanya kune mumwe.
turakiti rezuva nezuva, imba yekutandarira turakiti, kuronga kweturakiti yezuva nezuva, zonging of zvemukati nzvimbo, mazano eturakiti rezuva nezuva, mazano epamba, mazano emukati, zvemukati dhizaini, fenicha, kugadzira turakiti rezuva nezuva, mifananidzo yekamuri yekugara, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Mwenje wakagadzirwa ne twine kana kuti lace
Zviitire sofa kana rambi remwenje! Kugadzira rambi nemidziyo inobatsira ...
Bindu pallet bhenji
Nzira iri nyore yekugadzira bhenji pallet bhenji! Zvinhu zvinodiwa: pallets, p ...
Kicheni mune yakasvibirira
Kusarudza iyo girini yakasvibirira seyakakosha ruvara mukicheni yako kunovimbisa chisingaperi chitubu-la ...
Green gadheni nzvimbo
Pfungwa shoma dzemaitiro ekugadzira nzvimbo iri nyore asi yakanaka kwazvo mubindu. Mu ...
Kicheni dhizaini mu pink
Ichi chakanaka uye chinoshanda mukicheni dhizaini mu pastel pink-yepepuru chiratidzo chekuti ...
Iyo Kamuri Yekugara - mazano uye matipi ekuvanzika kwedenga reiling
Nekuda kwekusimudzira kwetekinoroji, kuvhenekerwa kwemwenje mune wedenga kwave ...